Madaxweynaha oo Qaabiley Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug – Goobjoog News
Madaxweynaha oo Qaabiley Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug
in Baarlamaanka, featured, Wararka Dalka
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay casho sharaf u sameeyey guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir iyo xildhibaano baarlamaankaasi ka mid ah, waxaana cashada ka qeybgalay guddoomiyaha baarlamaanka federaalka mudane Maxamed Cusmaan Jawaari.
Madaxweynaha oo hadlay ayaa sheegey in dowladda federaalka ay taageereyso dhamaan baarlamaanada ka jira maamul goboleedyada si Soomaaliya ay horumar iyo nabad u gaarto, isaga oo madaxda baarlamaanka Galmudug ugu baaqay in ay ka shaqeeyaan nabadda iyo caddaalada.
Guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casir oo hadlay ayaa sheegey in ay Muqdisho u joogeen si baarlamaanka federaalka uu oga caawiyo qoriska xeer hoosaadka baarlamaanka Galmudug iyo arrimo kale oo ay caawin oga baahanyihiin.
Guddoomiye Jawaari oo isna dhankiisa hadlay ayaa sheegey in ay gacan siin doonaan baarlamaanka Galmudug oo uu ku ammaanay hufnaan.
Waa markii koowaad oo ay si rasmi ah u kulmaan madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug tan iyo intii lasoo doortey bishii hore.
Madaxweynaha Galmudug Oo Ku Wajahan Magaalada Gaalkacyo
Ciidamada dowladda Iyo Kuwa AMISOM Oo Al-shabaab Ka Qabsaday Deegaanno Ku Dhaw Baardheere